June 10, 2021 N88LeaveaComment on ओली सरकारका मन्त्री : रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि प्रदेश सांसदबाट निकालिएकासम्म
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी पूर्णता दिएकी छिन् । उनले नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी थप आठ जनालाई सहभागी गराई २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन् । यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि यो दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हो । […]
प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय किन राखे आफ्नै गोजीमा ? चल्दैछ यस्ताे गाइँगुइँ !
June 10, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय किन राखे आफ्नै गोजीमा ? चल्दैछ यस्ताे गाइँगुइँ !
काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठन गरेका केपी शर्मा ओलीले एक महिना नपुग्दै दुई पल्ट मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । अहिले उनको मन्त्रिपरिषद बल्ल भरिभराउ भएको छ अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । तर, एक जना मन्त्रीलाई विना विभागीय राखेर रक्षा भने आफैं राखेका छन्, प्रधानमन्त्रीले । क्याविनेट […]
June 10, 2021 N88LeaveaComment on ओलीलाई एकपछि अर्को जोरका झट्का : एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले दिएन मान्यता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ । प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको […]
काठमाडौं । सत्ताबाहिर हुँदा मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेता जहिल्यै सिंहदरबार र काठमाडौंलाई चोर औंला तेस्र्याउँछन् । र, भन्ने गर्छन्,–हामी काठमाडौंलाई देखाइदिन्छौैं । अझ रमाइलो त के भने ? ओलीलाई देखिसहन्नथे, मधेसी नेताहरु । तर, अहिले सरकारमा प्रदेश २ कै बर्चश्व देखिएको छ, अर्थात् प्रदेश २ ले कब्जा जमाएको छ । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका ओलीले एमाले […]
June 10, 2021 N88LeaveaComment on नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज सा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित […]
June 10, 2021 N88LeaveaComment on ओलीका लागि ज्यान दिन्छु भन्नेहरूलाई नै ओली बा’ले बनाएनन् मन्त्री, यस्ताे छ भित्री कारण
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ जेठमा संसद विघटन गरेपछि दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे, जसमा एमाले र पूर्वमाओवादीका ७ मन्त्री थपिए । ती ७ जना मन्त्रीमा अनुमान गरिएभन्दा फरक अनुहार पनि भित्रिएका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिमा साथ दिने खगराज अधिकारीदेखि नारदमुनि रानासम्मलाई समेटे । तर, विगतदेखि मन्त्रीका लागि आश गरेका […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दुई विश्वासपात्र हुन्, गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेत । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा यी दुवैले शक्तिशाली मन्त्रालय ताकेका थिए । बस्नेतले प्रधानमन्त्रीपछिकै शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए भने बाँस्कोटा पूर्वतत अवस्थामा सञ्चारमन्त्रीको हैसियतले सरकारमा फर्किन चाहन्थे । तर, दुवैको योजना यसपटकका लागि असफल भएको छ । […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म १८ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। स्थिरताको नारा दिँदै सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमण्डल भने धेरै अस्थिर रहँदै आएको छ। पछिल्ला तीन वर्ष चार महिनामा उनले मन्त्रिपरिषद १८ पटक फेरबदल गरेका छन्। यसबीच उनले मन्त्रीहरू प्रशस्तै फेरेका छन्। बिहीबार मन्त्रीमण्डललाइ पूर्णता दिँदा थपिएका मन्त्रीका बारेमा चर्काे अालाेचना भइरहेकाे छ । […]
June 10, 2021 N88LeaveaComment on गण्डकीमा ढल्यो एमाले सरकार, मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त
पोखरा । एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा उनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यससँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त बनेका छन् । आज प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। मतदानमा […]
June 10, 2021 N88LeaveaComment on आफूलाई गृहमन्त्री नबनाइएपछि महेश बस्नेतले पोखे रिष, हेर्नुस् यस्ताे छ उनकाे आक्रोश
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफ्नो राजनैतिक जीवनमा पद प्राप्ति ठुलो बिषय कहिले नबनेको र पार्टी निति , नेतृव र निर्देसन सदैब पालना गरेर अगाडि बडेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि उनले सामाजिक संजालमा लेख्दै पार्टी भित्र मात्र होइन बाहिरका मान्छेलाई समेत प्रभाब र दबाब पर्ने गरी काम […]